Taageerayaasha Chelsea Oo Weerar Ku Qaaday Cesc Fabregas Markii Uu Dalbaday Pizza Oo Ah Cunno Uu Mamnuucay Antonio Conte. - Wargane News
Home Sports Taageerayaasha Chelsea Oo Weerar Ku Qaaday Cesc Fabregas Markii Uu Dalbaday Pizza...
Cesc Fabregas ayaa lagu eedeeyay inuu jabiyay sharciga tababare Antonio Conte ee ciyaartoyda ka mamnuucayay inay cunaan Pizza ka dib markii uu Snapchat soo dhigay sawirro Pizza uu dalbaday.
Conte ayaa caan ka ah inuu koontaroolo cunada ciyaartoydiisa isagoo shaqaaleysiiyay khabiir dhanka nafaqada ah Tiberio Ancora, waxaana uu cunooyin badan ka mamnuucay xerada tababarka Chelsea ee Cobhan.
Taageerayaasha Chelsea ayaana soo jeediyay in xiddiga reer Spain uu xaalada isku sii xumeynayo ka dib markii uu kursiga keydka ka galay Stamford Bridge islamarkaana laga reebay xulka qaranka Spain.
“Ugu danbeyn Cesc waxa uu sameynayaa go’aanka saxda ah, waxa uu bixi doonaa Janaayo. Inaad jabiso sharciyada Conte adigoo cunaya Pizza haha.”
Brian ayaa isna soo qoray: “Cesc waxa uu baxayaa Janaayo miyaysan aheyn? dhacdadaan Pizza-ha iyo De Sciglio oo lala xiriirinayo (in lagu soo bedelanayo), sida cad waa qasab inay wax ka socdaan qolka labiska.”